Taokanton’ny làlana atao hetsipanoherana ao Kazakhstana, lasa mahazatra · Global Voices teny Malagasy
Almaty, mitohy ny "ady ampiasàna rindrina" anesoan'ireo artista ny filoha
Voadika ny 31 Aogositra 2021 17:02 GMT
Ny andiany farany niverimberina amin'ny sary an-drindrina talohan'ny namafàna azy. Pikantsary avy amin'ny fantsona Youtube an'ny Radio Azattyk.
Niteraka fanontaniana teny anivon'ireo manampahefana ao Kazakhstana ny soratsoratra (graffiti) iray maneho ireo sary tranainin'ilay filoha taloha, natao hosodoko amin'ny rindrina. Kanefa, rehefa lasa manohintohina ara-pôlitika ny soratsoratra amin'ny rindrina, mailaka be ry zareo mandrakotra azy. Toa manodidina ny lova navelan'i Nursultan Nazarbayev, ilay lehilahy nanana dindo be tao Kazakhstana mahaleotena, ny ‘ady ampiasàna rindrina’ ifanaovan'ny governemanta sy ireo mpikatroka amin'ny taokanton'ny làlana sy ny governemanta.
Ny Martsa 2019 i Nazarbayev no nandao ny biraony, tao anaty tetezamita famindram-pahefana tamim-pitandremana fatratra, izay nanolorana ny fitondrana ho an'i Kassym-Jomart Tokayev, diplaomaty fahiny no sady namana tsy nivadika tamin'ny filohan'ny Loholona.
Taorian'ny fametraham-pialàna sy ny fifidianana izay nanamafy ny toeran'i Tokayev, nidina an-dalambe ireo vahoakan'i Kazakhstana, nanohitra ny fitohizan'ny fitondràna teo aloha, izay hatry ny elabe no efa namoritra ireo fomba fijery mifanohitra amin'ny azy.
Na izany aza, nifanome tànana mandrakariva tamin'ireo hetsika tselatra (flash mobs) ny hetsipanoherana teny an-dalambe sy ireo sanganasa artistika izay lasa niparitaka be teny anatin'ireo tambajotra media sôsialy tao amin'ny firenena.
Noho ny fanondroana azy ho ‘renivohitra ara-kolontsaina sy ara-toekarena,’ ny ankamaroan'ireny hetsika ireny dia nitranga tao Almaty, ilay tanàna lehibe indrindra ao amin'ny firenena.
Kihon-dalana iray miavaka ao Almaty, fihaonan'ny làlana Zharokov sy Mynbayev, no lasibatr'ireo mpanao zavakanton'ny làlana izay nisafidy ny hanao hosodoko an'i Nazarbayev anatin'ireo tabilao nomena endrika manokana, izay vetivety foana dia voaova tamin'ny alàlan'ny fampidirana sary mahatsikaiky tao anatin'ireo sariny.
Tany am-boalohany ilay fotodrafitrasa dia voahaingon'ny sary an-drindrina iray nanomezana voninahitra an'i XXXTentacion, Amerikàna iray mpiangaly RAP izay maty teo amin'ny faha-20 taonany tamin'ny 2018. Dane One, mpanakanto iray manao soratsoratra (graffiti), avy ao Almaty, no nanome endrika manokana ny sarin'ilay mpiangaly RAP ary nanampy andalana notsongaina tamin'ny tononkirany: “Hiroborobo izay tena izy.”
Tolona atao eny amin'ny rindrina
Nofotsiana ilay rindrina ary dia latsaka tany anatin'ny fanadinoan'ireo Almatiàna ilay sary an-drindrina rehefa, tamin'ny 2021, lasa lasibatr'ireo mpanao taokanto an-dalambe sy ireo manampahefana ilay izy.
Ny 4 May, nipoitra ny sary iray an'i Nazarbayev, nopetahana ny anarambositra ‘01’ fampiasan'ireo Kazakhstanis rehefa miresaka momba azy, ‘Elbasy’ na ‘mpitarika ny firenena,’ lalàna iray tamin'ny 2010 no nanomezana azy ilay anaram-boninahitra, ary ‘Forever Young’ (Tanora Mandrakariva) fanehoankevitra maneso ilazàna ny faharetany teo amin'ny fitondrana.
Ny 19 May, nisy nitsifotra teo amin'ny tampon-kandrin'i Nazarbayev teo amin'ilay sary an-drindrina ny teny hoe ‘Cancel’, fomba filaza mahazatra ao amin'ny aterineto hanipihana ny tsy faneken'ny olona iray sy ny faniriany hampiato tsy hanohy hijery.
Mitanila mankany amin'ny fanasaziana ireo mpikatroka naniratsira an'i Nazarabayev ny ao amin'ny tribonaly, dia i Nazarbayev izay lasa “Mpitarika ny Firenena” tamin'ny alalan'ny lalàna iray tamin'ny 2010 izay miaro azy tsy ho henjehana.
Eo anatrehan'ny faniratsiràna imasom-bahoaka an'i Elbasy, niroso tamin'ny fanadiovana rindrina ireo manampahefana.
Andro vitsy taorian'izy, nivoaka teny anatin'ny fampahalalambaovao indray ny momba ilay rindrina satria nasian'ireo artista soratra teo hoe ‘Hiverina aho…’, mbola nopetahana ny ‘01.’
Herinandro maro taty aoriana, ny 8 Jolay, andro roa taorian'ny tsingerintaonan'i Nazarbayev, nisy sanganasa artistika iray vaovao indray teo amin'ilay rindrina.
Tamin'ity indray mitoraka ity, sarin'i Nazarbayev mbola tanora no nivoaka, aingampanahy nosintonina avy amin'ireo andiana tahirin-tsary tany amin'ny taona 1960 fony izy niasa tamina toeram-pandrendrehana iray tao afovoan'i Kazakhstan.
Ny ‘01’, ny famaritana hoe ‘Elbasy’, ary ilay fanehoankevitra maneso ‘Forever Young’ no niaraka tamin'ilay sary an-drindrina, milaza ankolaka fa ilay artista na izay fikambanana nanatontosa ny teo aloha ihany no nikarakara ilay sary faharoa.
Kanefa, vetivety be ilay sary faharoa dia niharan'ny fanovàna: notsivalanina tamin'ny loko natsifotra ilay soratra hoe ‘Forever Young’ , ny famaritana hoe ‘Elbasy’ dia nasiana indray hoe “Cancel” teo alohany, ny tavan'i Nazarbayev naverina natao sary vaovao naseho ho toy ny an'i Batman avy amin'ireo Tantara an-tsary ” The Joker from DC Comics”.
Angamba ho toy ny faniratsiràna farany, sarinteny no nentin'ireo mpanakanton'ny làlana namarana ny zavatra nampiany: “Uly dala URY.” Amin'ny teny Kazakh hafa entina hamaritana an'i Nazarbayev, ny ‘uly dala uly’ dia ampiasaina hanondroana azy ho toy ny ‘zanakalahin'ny lemaka midadasika.’ Raha voanteny iray monja no ovaina, dia lasa graffiti manondro azy ho ‘mpangalatra (ury) avy amin'ny lemaka midadasika’ ilay izy.
Bitsika iray avy amin'ilay mpanao gazety, Assem Zhapisheva, no mamintina mazava ny fotoana nisehoan'ireo sary an-drindrina naneho an'i Nazarbayev teny amin'ny rindrin'ilay trano fandrendrehana ao Almaty .
Mitohy ny ady amin'ny sary an-drindrina
Ora vitsy monja taorian'ny nanovàna azy dia nofafàna ilay sary, nifanaraka tamin'ny pôlitikan'ny tsy fandeferana na kely aza ampiharin'ireo manampahefana amin'ireo sary mananihany, ny fanesoana na ny faniratsiràna atao an'i Nazarbayev.
Tsy nanaiky ny fanjakàna fa nanohy nanome voninahitra ilay filoha taloha. Amin'ity taona ity, ho fankalazana ny fitsingerenan'ny nahaterahany, sarivongana alimo roa no nalàna sarona, ny iray tao Nur-Sultan renivohitra, ary ny iray hafa tany amin'ilay tanàna atsimo ao Turkistan.
Ny hetsika Qazaq Koktemi na ‘Lohataona Kazakh’, izay nilaza ho tao ambadiky ny hevitra nanatontosana ireo sary an-drindrina, dia toa vonona ny hanohy hitaky ny fitondràna an'i Nazarbayev hiatrika fitsaràna.
Mitovy eo anatrehan'ny lalàna ny tsirairay ary ianao no tomponandraikitra tamin'izay rehetra nataonao.
Tsy misy iraharahiana izay isan'ny sarivongana atsangana ho fanomezana voninahitra anao, dikidiky fotsiny ihany no hahatsiarovan'ny vahoaka anao.
Efa eto izao ny fiovàna ary ambaranay fa tsy zanakalahin'ny lemaka ianao, fa mpandroba iray goavana!